ပီအက်စ်ဂျီ နည်းပြဟောင်း အူနိုင်း အမ်မရီကို အာဆင်နယ် နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် နီးစပ်နေ - Yangon Media Group
အာဆင်နယ်အသင်းသည် အသင်းမှထွက်ခွာသွားသောနည်း ပြအာစင်ဝင်းဂါး၏နေရာတွင် အာတီတာအား အစားထိုးရန်နီးစပ်နေပြီဟု သတင်းများကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြဟောင်း အူနိုင်းအမ်မရီကို နည်းပြသစ်အဖြစ်မကြာမီ ခန့်အပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် မန်စီးတီးလက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် အာဆင်နယ်ကစားသမားဟောင်း အာတီတာကို နည်းပြသစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန်နီးစပ် နေခဲ့ပြီးမှ (၄၆)နှစ်အရွယ် အူနိုင်းအမ်မရီကိုခန့်အပ်ရန် ဆွေးနွေးမှုပြု လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သတင်းများ၏ ဖော်ပြချက်အရ အမ်မရီသည် အာဆင်နယ်အသင်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဂါဇီဒစ်နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် နည်းပါးသည့်ပြောင်းရွှေ့ကြေးစရိတ်ဖြင့် အသင်းကိုအကောင်းဆုံး တည်ဆောက်ရန်နှင့် အာဆင်နယ်ပရိသတ်များ အကြိုက်တွေ့စေမည့် အသင်းပုံစံကို တည်ဆောက်ပေး မည်ဟုကတိပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အူနိုင်အမ်မရီသည် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို နှစ်နှစ်ကြာကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ဆုဖလား ၅ လုံးရယူပေးနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပြီးခဲ့သည့်ရာသီအကုန်တွင် ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်မှာ အသင်းမှထွက်ခွာသွားခဲ့ သော နည်းပြအာစင်ဝင်းဂါး၏နေရာတွင်အစားထိုးရန် အန်းနရစ်၊ အလီဂရီစသော နည်းပြများအပါအဝင် ကစားသမားဟောင်းများဖြစ် သော ဗီအဲရာ၊ ဟင်နရီ၊ အာတီတာတို့ကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ထိပ်တန်းနည်းပြများ၏ လစာတောင်းဆိုမှုများ အဆင်မပြေ မှုများရှိခဲ့ပြီး ကစားသမားဟောင်း အချို့မှာလည်း ပရိသတ်ဝေဖန်မှုများ ရှိနေသောကြောင့် အာတီတာကို ခန့်အပ်ရန် နီးစပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါ အာဆင်နယ်အသင်းသည် ဆီဗီလာနှင့် ပီအက်စ်ဂျီနည်းပြ ဟောင်း အူနိုင်းအမ်မရီနှင့် ဆွေးနွေးမှုမှာ အဆင်ပြေနေပြီဖြစ်သော ကြောင့် မကြာခင်နည်းပြသစ်အဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာဖွယ်ရှိနေသည်ဟု ဗြိတိန်မီဒီယာများက ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ အခြာသတင်းတစ်ရပ်အနေ ဖြင့် အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ကာဇိုလာသည် အသင်းနှင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေပြီဖြစ်သောကြောင့် အသင်းမှထွက်ခွာတော့မည်ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။ ကာဇိုလာသည် ခြေဖနောင့်ဒဏ်ရာကြောင့် အာဆင် နယ်အသင်းတွင် ၂ဝ၁၆ အောက်တို ဘာလမှစ၍ ယခုအချိန်ထိပွဲထွက် ကစားခွင့်မရခဲ့သူဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့ မန်းမြန်မာ ပလာဇာ လေးလွှာတွင် ရုပ်ရှင်ရုံပြုလုပ်ရန် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်စဉ် မီးလေ??
အခက်အခဲများကြားမှ ဆိုးလ်ရှားနှင့် ဒီဂီယာတို့ စံချိန်သစ်များတင်ခဲ့
နေအပူရှိန်ပြင်းပြီးနောက် ရုတ်တရက် မိုးရွာလာခြင်းကြောင့် မှရိုးကုန်းကျေးရွာရှိ သဲနုန်ြးေ??